Xanachi (cancer) Buqqisanii Darbuu Malee Waldhaansa Hin Qabu! – Kichuu
HomeNewsAfricaXanachi (cancer) Buqqisanii Darbuu Malee Waldhaansa Hin Qabu!
Damee Boruutiin, Ebla 27, 2019
OPDO yoomiyyuu of danddeetee jiraachuu hindanddeesuu. Tigree jalaa baatee Amaaraa jala galuuf wixiffachaa jirti.
Xanachi dhukkuba keessaa isa hamaa dha. Qaamuma ofii kana deebisee bineesa godhee nama nyaachisuu caalu daddaffiin lubbuu nama keessaa baasa. Dhukkuba xanachaa fayuufi hidhi xanachaa qaama keessaa buqa’ee baduu qaba. Amma hidhi xanachaa qama keessaa buqqa’ee hin baane xanacha waldhaansi hin fayisu. Waldhaansi xanachaa guyyaa du’aatii xiqqoo dheersuun ni mala.
Uummata Oromoof OPDOn xanacha diinni irratti gad horde. OPDOn Ijaarsa Oromoo dhugaa miti. OPDOn fakkaatuu (fake) ijaarsa Oromoo ti. Uummatni Oromoo OPDO hurursaa nan bilisooma jedhee kan eegatu ykn kan abdatu yoo tahe of gowwosaa jira. Waan OPDOn Uummata Oromoo keessatti hojjechaa jirtu namni hin agarree yoo jiraate isa du’ee dhakkaa baate duwwaa dha. Eyyee ayyaan ilaalatoonni warri “bilisoomnee jirra”. “Ijoolleen Abbaa Gadaa Masaraa Miniliki nuuf galan” jedhanii uummata sobanii ofis sobaa jiran argaa jirra. Warri kanaafis akkuma OPDO seenaan dhiifama hin godhuuf. Namni dantaa mataa isaaf jedhee haqaa fi mirga uummata isaa dabsu seenaa fokkisaa qabaata.
OPDOn qarre fi qeerroo, jaarsaa fi jaartii, Abbootii Gadaa fi haadha Siinqee, dantaan, gandaan fi ammantiin gargar baasuu irra dabartee ofii ishee iyyuu akkuma uummata gootu gargar akka wal hiraa jirtu kan ifatti argamu. Akkuma dhukkuba xanachaa sana uummata Oromoo wal itti dirtee wal dura dhaabaa jirti. Namni tokko tokko uumaan waan dadhabaa taheef utuu badii tahaa jiru arguu dantaa xixxiqoof gowwomee yakka saba isaa fi seenaa saba miidhu hojjeta.
Hawaasa Oromoo keessa gaaffii tokko qarree fi qeerroo Oromoo gaafachu fedha. Mee warri mana, lafa, hojii f horiin isinii kenname ykn akka isiiif kennamu abdii argatan ganama ka’aa of ilaalee dura dhaabadhaa ija keessa of ilaalati ‘an eenyuu?’ jedhaa of gaafa dha. Bitaa fi mirga keessan ilaalatii obbolewwan keessan kaleessa haqaa uummata isaaniif dhaabatnii aarsaa tahan yaada dha. Lafee isaanii caccabee fi dhiiga isaanii dhangala’e irraa tarkaanfatnii afaan kaa’aa OPDO fudhachuun naaf malaa? jedhaa of gaafa dha. Garuu boree fi xiiqii warri nyaannu of itti qaana’uu qabna malee warri wareegame ba’aa isaanii nutti hobaafatanii darbaniiru.
Jaalanus jibbinus ilmi Abbaa Gadaa Masaraa Minilki hin seene. Kan Masaraa Miniliki seene akaakilee Miniliki akka tahe abbaatu himate. Kononeel Abiyi gaafa mudamu dhaabbi isaa ifa godhee jira. Haati isaa akka “Mootii” tahu mul’ata qabdi jedhe. Waltajii irratti haadha isaa fi haadha mana isaa qofa galatooma jedhe. Haatii fi haati manaa waan Habashaa tahaniif faarsamuu qabu. Abbaan isa guddise yoo Abbaa foonii illee tahuu baate maqaan isaa dhahamne. Waan Orommoo keessaa iyyuu Islaama tahuun warra Habashaa biratti isaaf qaanii dha. Warra Habashaa biratti fudhatamuuf tooftaaf waan godhe fakkaata.
Akeekni isaa kaayyoo Minilki jalqabe bakkaan gahuu akka tahe waltajii muudama isaa irratti ifatti dubbate jira. Tooftaan isaa kun warra Habashaa biratti fudhatama argatee ture. Yaroof illee taatu gammacuun fudhatanii Abiyi masaayii keenya Waaqa biraa nuuf ergame jedhanii faarsuu jaqabanii turan. Sana booda yaroo fuula itti guuran waan Oromoo gadsiisu hojjetee isaan gammachisee araarfachuu yaala.
Masaraa Minilki akka seeneen haaromsuu hojii isaa duraa godhatee jira. Masaraa Minilki haaromsuuf horii biliyoonan baasta utuu namni miliyoonii sadii qee’ee isaa irraa buqqa’ee kan nyaatu dhabee dhumaa jiruu jedhanii gaazexefatoonni isaa gaafanan horii kadhaan haaromsaa jiraa jedhe. Maaliitu haaraa? Umurii koo guutuu “gananaa Itoophiyaa” isaan jedhan kadhadhumaan jirtun arga. Kana malee horiin kadhaan dhufe uummata beela’aa jiruu akka hin nyaachifne kan dhowwu jira? Waan isaaf dhimma baasu hojjechaa jira.
Hawwii Masaraa Minilki kana keessa bara dheeraa jiraachuu qaba. Akeeka isaa kana bakkaan gahuuf Oromoo diiguu, tufachuu fi xiiqqeessuu tooftaa godhachaa jira. Yaroo inni an ilma Oromoo ti jedhee dubbatu guyyaa tokko dhaga’ee hin beeku. Anaaf Alebaachew Mekonnon fi Kononeel Abiyi jiddu yoo gargarummaan jiraate Kononeel Abiyi Afaan Oromoo dubbachuu dha. Afaan Oromoo duwwaa utuu hin taane Afaan Tigrayi fi Afaan Arabaas ni dubbata. Afaan saba tokko dubbachuun miseensa sab sana nama hin godhu. Akka Oromoo tahe afaan isaa guutee kan himachuu qabu isa malee warra inni gurmeesse akka Oromoo Amaaresan ergaa jiru miti.
Yaa Uummata Oromoo! mootummaa Kononeel Abiyi irraa bilisummaa eegachuun abjuu dha. Kononeel Abiyis akkuma ijaarsa OPDO fakkeesitu (fake) dha. Harka mirgaan faallaa hojjechaa harka bitaan kan uummata wajjin jiru of fakkeessa. Hojiin isaa inni guddaan akka warra Hollywood keessatti diraama hojjetanii kameeraa dura fiigee ilkaan baasuu dha. Mumul’achuu fiiguu malee rakkina uummatni keessa jiru hiikuuf yaroo fi fedhii hin qabu.
Kononeel Abiyi ummurii isaa guutuu mootii tahuuf yoo ayyaana argate an isaaf nan gammada. Garuu lafee fi dhiiga gootota Oromoon qabsoo as gahe shira xaxuudhaan dabsanii dantaa mataa ofiif olchachuu irraa dhaaba dha jechaa jirra. Dhiiga ilmaan Oromoon daldaluun hatattamaan dhaabbachuu qaba. OPDOn abjuu keessa jirti. Hojii ishee kana waan Uummatni Oromoo beekuu hin seetu. Siyaasaa Oromoo gowwomsu kana keessa bara baayye waan turaniif humni isaan injifatu waan jiru itti hin fakkaatu. Siyaasan isaanii garuu isumaa dulattii TPLFf jalatti uummata dantaan gooduu baran malee waan haaraa hin qaban. Dantaan nama bituu malee OPDO bututtuu fi dongortuun Uummata Oromoo gowwomsuuf dandeetii uumaa iyyuu hin qabdu.
Gareen ayyan ilaalatoonni gad badiin warra foolii Oromoo qaban Obbo Lammaa fi aadee Xayyiba Hussen Oromiyaa keesa aritee warri ergamtoota Habashaa taate diqaalonni Habashaa Oromoo bulchuu itti darbuuf yaadaa jrti. OPDOn Afaan, Aadaa, seenaa fi mirga Uummata Oromoof kabajaa tokko hin qabdu. Warri Amboo irratti OroMara yaa’ii waamee seenaa Uummata Oromoo dhoksuu fi xiqqeessu kan Habashaa ol kaasuu fi faarsu Addisuu Argaa fi Shimalis Abdisaa ergamtoota Kononeel Abiyii yoo tahan itti yaadanii, qoratnii qopheesanii kan dhiyeesan waan tahee dogonorri keessa hin jiru. Akka Gootota Oromoo Arsii gantoota kana of irraa ari’uu qabna. OPDOn Uummata Oromoof dhukkuba xanachaa waan taateef gamtaan kaane irree tokkoon akka Wayyaanee of irraa buqqisuun dirqama keenya!
Injfannoo Uuumata Oromoo!
Gadaan Gadaa Bilsummaa Ti!
Nama khijibu numa garree kha akkana khana garuu…..KKKKKK Namalle qusatu hogga khijibu #GuddiisaBaddu 😂😂😂😂😂😂😂😂
አሳዳጊ የበደለው ውሸታም
Hahahahah a bada caalaa kolfaan nu fixxee
Oromoon Ixoophiyaaf Of dhamaasu dhuma isaa VIDEO kanarraa baradhaa”warri ammallee karaa kanarratti ifaajaa jirtan!
This is Habesha land!!
የጎበነ ዳጬ ታሪክ እና የኦሮሞዉ ጠባሳ። በታሪክ ተመራማሪዉ ኤደኦ ቦሩ
Hawaasa Oromoo Washington DC fi naannawa jiraattan maraaf